Yakanakisa Homemade Kuedza kweVana - Ikkaro
kudzidziswa >> Kumba Ongororo >> Kuedza kwevana
Mukati mekuyedza kwemumba zvinosungirwa kuti kune nzvimbo yakakosha yezvinonzi zviyedzo zvekumba zvevana. Izvo zviyero zvakapusa izvo vana vanogona kuzviita vari vega kana mune vanhu vakuru uye zvakagadzirirwa kuitirwa "kumba", ndiko kuti, nezvinhu zviri nyore kusvika uye zvakachipa.
Zvakareruka kuyedza uye zvigadzirwa, izvo zvinowanzo pindura kune chimwe chivakwa uye izvo zvinotibvumidza kwete chete kushamisa vana nevechidiki, asi zvakare kutsanangura zvinoitika zvemuviri kuseri kwezviitiko izvi.
Nei zvichiitika? Uye chii chinoitika kana panzvimbo peizvi ndichizviita nenzira iyi? Kana kana ndikachinja zvinhu / zvigadzirwa?
Zvinogara zvichinakidza kuti ivo vanotariswa nevakuru uye kwete chete kuvimbisa kuchengetedzeka kwemwana asi kumutungamira. Mubatsire kufunga, kuzvibvunza mibvunzo chaiyo. Kubatsira iwe kuwana ruzivo uye kushandisa maturusi aunowana kwauri.
Uye zvingangodaro zvakakosha kupfuura zvese kuti ukwanise kumutsa kuda kwako kuziva nezve zvinhu nenyika yakatitenderedza. Kugadzira, kuda kuziva, kudzidza uye nesimba rakawanda.
Ndakagara ndichifarira rudzi urwu rweyedzo asi sezvo ndine vana zvakanyanya :)
Iko kunetsekana sekugara kuri mukuziva nzira yekuparadzira zvirimo, kuyedza uye zvigadzirwa zvakagadzirwa zvevana pamwechete, zvakasiyana.Uye kugadzirwa kwematoyi?
Zvakanaka, icho chinhu chatinotarisira kuti chichagadziriswa zvakanaka. Ini ndinofunga isu tine yakanaka yezvinyorwa zvikamu.
Nakidzwa uye tora mukana wekupera kwevhiki kuenda kunoedza izvo zvatinokusiira iwe nevana vako. Uye kana iwe uri mudzidzisi, usazeze kuenda navo kumakirasi.
Uye kana iwe ukaita chimwe chinhu. Ndokumbira utaure uye utiudze kuti zvakafamba sei.
Nzira yekugadzira chando chakagadzirwa
Ndave nenguva ndichida kuedza gadzira chando chakagadzirwa. Uhwu hunyanzvi huchatibatsira kushongedza chiitiko chedu chekuzvarwa paKisimusi kana tikaita modhi pamwe nevadiki uye isu tinoda kuchipa kubata kwechokwadi nechando. Kana kungo svibisa maoko avo uye nekufema.
Ndakaedza nzira shanu dzakasiyana kuti ndive nesinou yekugadzira, ndinovaratidza uye ndovaenzanisa muzvinyorwa zvese. Internet izere ne tutorials maitiro ekugadzira chando nemanapukeni uye ndinozviona chiri chiitiko chine njodzi uye chisina kukodzera vana.
Mushure mekuyedza kwekutanga kushushikana, ini ndakafarira chiitiko ichi zvishoma zvekuti ndakatsvaga imwe nzira yekugadzira chando chekugadzira, nenzira yakachengeteka, inoshamisira iwe yaunogona kuita nevana vako. Pazasi une zvese.
Kana iwe uchida zvigadzirwa zvekutengesa kuti uwane chando chakagadzirwa, chando chakaipa kana chando chiriporipocho, tinokurudzira izvi.
Sepkina (chando chakagadzirwa ne glitter)
Maitiro ekuita chamupupuri
Muchikamu chino tinosiya nzira dzinoverengeka dzekuberekazve mini chamupupuri kumba. Inosanganisira kugadzira whirlpool mune ... Ramba uchiverenga
Nzira yekugadzira inki isingaoneki
Tinorega nzira nhatu dzekugadzira inki isingaonekwe kumba uye nyore.
Yokutanga uye pamwe yakanyanyisa kujekesa inosanganisira kuunza shavings yesimbi, iyo yatinobvisa kubva kune vanoongorora. ndimu muto uye rega izorore pakati pemazuva manomwe kusvika gumi nemashanu.
Inki isingaonekwe nemon
Kuonekwa kumba kunoedza nemukaka
Ndakazviwana ndiri mukati ndizununguse neizvi yakajeka uye yakapusa kuyedza kweimba, Yakagadzirwa ne:
Iro Bouncing Egg - Chemistry Kuedza
Inonakidza, iyo kuyedza kuti vanotitumira kuchikoro chemwanasikana wangu. Zviri nezve kuyedza kuri nyore kuita nevana veduNdinoziva maitiro ekuvazivisa mairi nyika inoshamisa yesainzi, kunyangwe naizvozvi pamwe tiri kuvagadzirisa.
El munhu Iyo inoumbwa nechaunga chemakemikari anoita basa rakasarudzika uye rakakosha kwaro, semuenzaniso calcium ine rakaumbwa basa (bone kuomarara). Kana uchinyudza pfupa rakachekwa uye uisiye kwemazuva akati wandei, iwe unogona kuona kuti inonyorova sei uye inogona kutokotama kana kutyoka nezvigunwe. Izvi imhaka yekuti iyeacetic acid (vhiniga) mhinduro "inoba" zvicherwa kubva pfupa nekuita navo uye kugadzira, semuenzaniso, calcium acetate. Nenzira iyi, huwandu hwecalcium hwaderera, izvo zvinokonzeresa osteoporosis zvakanyanyisa.